Kaningi kuyenzeka ukuthi indlela umuntu azizwa ngayo liwohloka ngaphandle kwesizathu. Ngisho abantu omuhle kakhulu futhi bejabule ngezinye izikhathi bayacindezeleka futhi azizwe enesizungu. Blues angaba knock unaphakade umuntu aphume kukhwelana, ukuze uthole ukuhlala ekhaya futhi bayenqaba ikhefu okuthakazelisayo kude. Ukuvimbela ukucindezeleka ukuze bathole ukulawula isimo sakho, udinga okungaphezu nje like ungakwazi uvula imicabango eyakhayo ukuze sivuselele isimo semizwa yakho.
Bheka omuhle ezintweni ezincane
Isikhathi esining impela, ukuze ukuzibizela ngemicabango emihle, ngokwanele nje ukwengeza ezihlukahlukene kancane ukuze ukuphila kwansuku zonke. Zama, isibonelo, babuyele emsebenzini indlela ehlukile, ngisho noma kuyoba isikhathi eside kunokujwayelekile. Ungakwazi ukupheka ezinye isidlo engavamile futhi abazitika dinner okumnandi. Noma iya ngemuva umsebenzi endaweni cafe futhi ukuhlangabezana abangane, ngoba zokuxhumana nabantu abahle, yebo, kudala isimo for ngemicabango emihle.
ewusizo kakhulu ngezikhathi ukushintsha isimo. Uma unomuzwa wokuthi isimo iye spoilt kakhulu, ukuthatha iholidi uhambe khona lapho ngifuna ukuvakashela. Uma lokhu kungeke kwenzeke, zama okungenani ukuphuma edolobheni ngempelasonto ukujabulela inyunyana bemvelo senqene umsindo befuna. Ngokuvamile ukuhamba emoyeni opholile emapaki futhi izikwele.
Kuyasiza ekulweni ucasukile ngempela ushintsho isithombe. Ikakhulukazi le ndlela esihambelana abesifazane. Khumbula, uma uke wavakashela a salon ubuhle kanye bethengela? Mhlawumbe manje yisikhathi sokuba zithokozise izinto ezintsha futhi senze kwekhanda stylish.
Enye yezindlela eziphumelela kakhulu zokwenza abantu ukuheha imicabango eyakhayo ukuze sivuselele isimo semizwa yakho ilalele umculo okuhle. Jikela ingoma zakho ozithandayo elikhulu acule endleleni amagama ajwayelekile. Ungalalela izingoma ngawo axhunyiwe izinkumbulo ezimnandi, nangokwengqondo ukuhamba emuva ngosuku uma babejabule kakhulu.
Abanye abantu bakhetha ukuhamba nge-headphone ukuthi idlala umculo wakho oyintandokazi, abanye abantu bathanda zihlanganisa ingoma kancane, uphumule uyolala ngamehlo akho ivaliwe. Wonke umuntu eveza imibono yakhe siqu mayelana yokwelapha umculo, kodwa linembile ngempela, into eyodwa: umculo angathuthukisa indlela umuntu azizwa ngayo futhi isikhathi eside ukuze ishaje omuhle.
Ukuhleka - umuthi best ukucindezeleka
Cishe uye waqaphela ngaphezu kwesikhathi esisodwa ukuthi ajabule wabuya masinyane, kufanele kuphela ukuhleka zashaya. Ukuze wenze lokhu, ungabona comedy ezinhle Soviet noma angaphandle, ufunde izindaba noma ufune ngemicabango emihle ezithombeni.
Uma kungenzeka, umeme abangani bakho, ukukhumbula izindaba ezihlekisayo kusukela ukuphila kwakho ndawonye uyobahleka. Ngaso sonke isikhathi khumbula ukuthi uhleko - lena ithuluzi omkhulu athokozise ngokushesha futhi unomphela.
ngendlela elula kodwa yingozi kuzo ukucindezeleka
Abanye abantu bazama ukuthola imicabango eyakhayo ukuze sivuselele isimo semizwa yakho, aye ayisebenzisa kaningi utshwala. Yiqiniso, inhliziyo ukuzokhuluma inhliziyo nabangani bakho abakhulu phezu ingilazi vodka ngezinye izikhathi uyakwazi balahle blues. Okubaluleke kakhulu, indlela yokubhekana nezinkinga akubi umkhuba.
Utshwala unika nomuzwa wesikhashana izixazululo ngengqondo zezinkinga zanqwabelana. Njengoba nje isenzo sabo wayeka le ndoda yaphindela futhi wasala yedwa Eselahle ithemba futhi ezingaphelele. Ngesikhathi esifanayo, abaningi ngaleso sikhathi futhi kukhona isifiso ukukhohlwa ngokushesha ngangokunokwenzeka, ukuthatha umthamo njalo utshwala.
Ukuze ugweme ukuwela ogibeni asesebenzisa le ndlela yokuthuthukisa inhliziyo ngangokusemandleni, futhi kangcono futhi ithole kanye ngaphandle kwalo.
Iya iphupho lakhe
Isikhathi esining impela ezinsukwini esimatasa, abantu abaningi bayakhohlwa amaphupho abo, noma unomuzwa wokuthi azisoze zagcwaliseka. Kulokhu, kwemizwa emicabangweni emihle kuzokusiza ukusetha isimo okwesikhashana.
Uma umuntu, isibonelo, ukwenza ibhizinisi okungalungile, futhi ezonda umsebenzi wakhe, cishe, ngokuvamile esimweni ecindezelekile. Uma amaphupho owesifazane yomkhaya futhi izingane, kodwa bahileleke career kanye akabashiyi isikhathi ngokwakho ku ubumfihlo, isifo sokucindezeleka sizovele ukuphishekele ezingasho. Kulezi zimo, kufanele uqale ukulwa hhayi ucasukile futhi enze ukuba ucingo.
Kuleli zwe, ayikho into engenakwenzeka. Njalo lapho isifiso Ungashintsha imisebenzi mnandi, uqale ngonanzelelo impilo yabo kanye nokubukeka, ngokuvamile ukuchitha isikhathi nabangani kanye nomndeni. Futhi ngisho noma bonke lokhu kuyodingeka zama kahle, ungakwazi ungalokothi uphonse ithawula futhi lamukele iqiniso lokuthi unganelisekile.
Indoda abakuphila kwabo njalo egcwele izenzakalo ezithakazelisayo, ukudinwa, futhi-ke, kusekhona ecindezelekile. kwemizwelo yethu incike kulokho esikwazi ukukwenza ekuphileni kwansuku zonke. Yenza zonke izinsuku kancane licace futhi okungajwayelekile, futhi uzophawula ukuthi ucasukile kuyoba ngawe isivakashi ezingavamile.
Uwumnikazi wenkampani noboya - mkhuba efudumele kwesizini